Geed | December 2019
Ugu Weyn Ee Geed
Sidee si dhakhso ah u burburisaa geed iyada oo aan la jarin, hababka kiimikada looga saaro
Ka saarista geedku waa mid shaqeynaya oo aan mar walba hab nabadgelyo ah lahayn. Badanaa waxaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanaayo sawiridda iyo raridda. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo kale oo badan oo looga takhalusi karo qoryaha qubeyska ah. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa qaababka jira ee sida loo burburiyo geed aan jarin.
Waxay u egtahay ash, beerashada iyo xanaaneynta dambaska dalka
Qoryaha Ash ayaa loo adeegsaday xataa xitaa awoowayaasheena si ay u abuuraan qalab dagaal iyo shuban fara badan oo loogu talagalay hubka qabow. Waqtigan xaadirka ah, geedka waxaa lagu beeray walxaha qurxinta beerta, miraha ashka waxaa loo isticmaalaa cuntada, caleemaha iyo jilifku waxaa loo isticmaalaa daawada. Ash: Qeexida Ash waa xubin ka mid ah qoyska reer Olive.
Waxaa fiican in lagu xakameeyo qoryaha laga bilaabo qulqulka
Wood waa mid ka mid ah qalabka ugu badan ee loo isticmaalo dhismaha iyo qalabka dhismaha. Si uu u shaqeeyo ilaa inta suurogal ah, wuxuu u baahan yahay daryeel sax ah. Waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn xun ku leh alwaaxyada oo ay u fasaxaan mid aan la isticmaali karin, in la jabiyo sifooyinka dibedda ah ama burburinta dhismaha gudaha.
Qoryaha ayaa ka fiican
Ka hor inta aan la bilaabin xilliga kuleylka, ganacsatada gaarka loo leeyahay waxay iibsadaan qoryo, dareenka oo keliya qiimaha iyo muuqaalka walxaha guban kara. Wixii karinta dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa wax kasta oo gubanaya, sababtoo ah hilibka inta badan wuxuu helaa dhadhan aan fiicnayn. Maqaalkani waxaan kuu sharaxi doonaa sababta aad u fiirsanaysid sifooyinka alwaax gaar ah, waa maxay farqiga u dhexeeya dhagaxyada adag iyo kuwa jilicsan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geed 2019